I-quartz yegolide e-quilz ene-hematite yintsimbi enqabileyo - ividiyo
Thenga i-quartz yendalo egolide yendalo kunye ne-hematite kwivenkile yethu
I-quartz yegolide e-quilz ene-hematite lilitye elinqabileyo. I-Rutile kunye ne-hematite kwi-quartz ziqhelekileyo zifunyanwa ngokwahlukeneyo, kodwa kunqabile kunye.
Igolide Quilig quilz
I-quartz yegolide e-rutilated luhlobo lwe-quartz equkethe inaliti ye-acicular yenaliti. Isetyenziselwa amatye anqabileyo. Oku kufakwa ikakhulu kukhangeleka kugolide, kodwa kukwajongeka ngathi kunesilivere, ubhedu bubomvu okanye bumnyama. Banokuhanjiswa ngokungacwangciswanga okanye kwimixokelelwane, ngamanye amaxesha ecwangciswe njengenkwenkwezi, kwaye banokungqengqeleka okanye mninzi ngokwaneleyo ukuba bawenze umzimba wequartz phantse opaque. Ngelixa ezinye iindlela zokuthambekisa zihlala zinciphisa ixabiso lekristale, i-quartz eyinyani eqinisekisiweyo enyanisweni ixabisa umgangatho kunye nobuhle bezi zinto zibambekayo.
IHematite inombala omnyama ngentsimbi okanye isilivere-ngwevu, emdaka ngombala obomvu-onsundu, okanye bomvu. Inombiwa njengeyona ndawo iphambili yentsimbi. Iintlobo ezahlukeneyo zibandakanya i-ore yezintso, i-martite, i-iron iron kunye ne-specularite. Ngelixa ezi fomu zinokwahluka, zonke zinerenbheli ebomvu. IHematite inzima kunesinyithi esicocekileyo, kodwa iba brittle ngakumbi. I-Maghemite yi-hematite kunye ne-magnetite enxulumene ne-oxide mineral.
I-quartz yegolide e-rutilated njengazo zonke iintlobo zekristali ye-quartz ziindawo zokuqina ezomeleleyo, kwaye iRutile ikwayi-amplifier eyomeleleyo.
Amandla amakhulu e-sizzling of threads rutile aya kuzisa ngamandla amakhulu, kwaye adibaniswe ne-quartz enze amandla angummangaliso. Le nkqubo inokuvuselela ubuchule bakho bokomoya, kunye nokukwazi kwakho ukubonisa into oyinqwenelayo ebomini bakho, ngamandla enjongo.
I-quartz yegolide e-quilz ene-hematite, evela eBrazil